August 16, 2019 - khitalinmedia
August 16, 2019 Khitalin Media 0
[ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့ ၄။ […]
မြေပြိုပိလို့ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သားအမိ ဝင်ပူးနေတဲ့ ( ရုပ်သံ )
မြေပြိုပိလို့ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သားအမိ ဝင်ပူးနေတဲ့ ရုပ်သံ သဲဖြူကုန်းမှာ ရေဘေးရှောင်ဖို့ တောင်ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမှာ နေရင်း တောင်ပြိုပိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင် မအေးအေးထွန်းနဲ့ ၁နှစ်ခွဲအရွယ်ရှိ သားဖြစ်သူ မောင်လင်းခန့်ဟိန်း ရှေ့က လက်အုပ်ချီထားတာက မိခင် ဝင်ပူးနေတာဖြစ်ပြီး နောက်က ဖက်ထားတာက သားငယ်လေး ဝင်ပူးနေတာပါ သူတို့ […]
ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်ကို လက်ထပ်မလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်(၅) ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်ဗျာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နောင်ချို မိုးကုတ် မိုးမိတ် မိုင်းလုံ သီပေါ နမ့်မတူ ကျောက်မဲ ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ် ရမ်းကားတာမဟုတ်….လွမ်းစရာစကားတွေလာမပြောနဲ့…. စစ်သား တာဝန်ချိန်မှာ…..စစ်ဆင်ရေးကာလမှာ မလွမ်းတတ်ဘူး…. နောက်နေ့….အာရုံအတက် နေအထွက်မှာ ခွေးအသေကောင်… ခွေးအရှင်ကောင် ဘယ်နစ်ကောင်ရမလည်းကြည့်ထား…. တရုတ်ပြည်မကူးဘို့ ကအဓိက…..။Heinn Htet အခု […]
ရန်ကုန်-ပြည်- မန္တလေး Express ကားပေါ်တွင်ဖြစ်သည် ကားပေါ်ရောက်ရင်အိပ်တတ်တာကြောင့်အသက် ၅၀ ဝင်းကျင်ခန့်အဒေါ်ကြီးတယောက်မှ ယဉ်မောင်းအားကားစတင်ထွက်ချိန်တွင် အော်ပြောလေသည်။ ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ရင်အဒေါ့်ကိုပြောပါကွယ်” ” ဟုတ်ကဲ့ ဂျီးဒေါ်ရေ” ထိုသို့ဖြင့် ကားစီးလာရင်း အဒေါ်ကြီးမှာအိပ်ငိုက်ပါလာတော့သည် နာရီအနဲငယ်အကြာတွင်တော့အဒေါ်ကြီးအသံဟိန်းထွက်လာသည်။ ” ကားဆရာရေ အုတ်ဖိုတာဆုံရောက်ပြီလားကွဲ့” ယဉ်မောင်းရော စပါယ်ယာပါအခက်တွေ့ကုန်ကြလေသည် အုတ်ဖိုတာဆုံကိုအတော်လေးကျော်လွန်သွားတာကိုး […]
ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်​ မျက်​ရည်​​တောင်​ကျမိတယ်​ (ကျု ပ်​တို့ကသူ​တောင်းစား​တွေပါ) ဘုန်းကြီးတွေကို သူတောင်းစားလို့ပြောတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးက ပြန်ရေးထားတာလေးပါ။ ဟုတ်​ပါတယ်​ ဘုန်းကြီးဆိုတာ သူ​တောင်းစားတွေပါ မိုးမလင်း​သေးဘူးသူများအိမ်​​ရှေ့ တံစက်​မြိတ်​​အောက်​မှာခွက်​အမည်းကြီး ပိုက်​ပြီးတန်းစီးပြီး ​တောင်းစား​နေတာ ကျုပ်​တို့​တွေပါ။ ဒီသာသနာထဲ ၀င်​လာရင်​ဒီလို ကဲ့ရဲ ပြစ်​တင်​ ​ဝေဖန်​မယ်​ဆိုတာ သိ​နေပါလျက်​ဇွတ်​ထိုးပြီး ကတုံးတုံး သင်္ကန်းဝတ်​ခဲ့ကြတာ […]
ကျွန်တော်စစ်သားပါ …… သူပုန်သေရင် ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာပို့ပြီး စစ်တပ်ကရဲဘော်တိုက်ပွဲကျတော့ “မျက်ရည်မခြူနဲ့”လို့ပြောတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ကျွန်တော် စစ်သားလုပ်နေပါတယ်။ သူပုန်ကအင်အားနည်းတဲ့တပ် စခန်းတွေဝင်ပြီးသတ်ဖြတ်တော့ စစ်ပွဲရဲ့သဘာဝလို့ပြောပြီး တပ်ကသူပုန်ကိုရှင်းတော့ “စစ်ပွဲရပ်” ဆိုင်းဘုတ်ကိုင် လမ်းပေါ်ထွက်မတ်တတ်ရပ်ပြကြတဲ့ တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော် စစ်သားလုပ်နေပါတယ်။ သူပုန်ကသေနတ်ဝင်လုတော့ ကျောင်းသားလေးတွေမို့ပါ လို့ပြောပြီး ကိုယ့်သေနတ်ကိုဝင်လုလို့ သေနတ်နဲ့ပြန်ပစ်တော့ တရားစွဲထောင်ချခံရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ကျွန်တော်စစ်သားလုပ်နေပါတယ်။ […]
၇ ယောက်နဲ့ ရာချီအုပ်ကြီးကို ၃ နာရီလောက် ခံပစ်သွားတာတဲ့
ဒီနေ့ ၁၀၁ က 2IC အကိုကြီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ … “ငါ ဂုတ်တွင်းထဲက ကောင်လေးကို လေးစားတယ်ကွာ .. ၇ ယောက်နဲ့ ရာချီအုပ်ကြီးကို ၃ နာရီလောက် ခံပစ်သွားတာ .. ” တဲ့ ဟုတ်တယ် … သူတို့အားလုံး ကျဆုံးကုန်ကြတယ် […]
အမျိုးသား အယောက် ၁၀၀,၀၀၀ ပြည့်အောင် ကာမစပ်ယှက်လိုသည့် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ပိုလန်သူက ၎င်း၏အစီအစဉ်အတွက် ဥရောပနိုင်ငံများ အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နှင့် မြန်မာသို့ ခရီးဆက်လိုကြောင်း အော်စတေလီယန်တိုင်း သတင်းစာနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ပြော ကြားခဲ့သည်။ အင်နီယာလိုင်စကူစကာ […]